Kolontsaina sy asa tanana: mbola ady sarotra ny hamelona ny tsena | NewsMada
Iray amin’ireo sehatra nitondra faisana noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19 ny kolontsaina sy ny asa tanana. Miainga any amin’ny mpanamboatra ka hatrany amin’ny mpivarotra, mahita fa mbola ho mafy ny ady…
Manomboka misokatra ny lalana ahafahana mivezivezy eto Madagasikara. Toa milaza izany fa hisokatra ihany koa ny sehatra sasany toy ny kolonttsaina sy ny asa tanana. “Efa tsara ny fanapahan-kevitra, saingy tsy mora ny hamelona sy hamerina indray ny lalam-barotra sy ny tsena”, hoy Andrianaivo B, mpivarotra asa tanana mifandraika amin’ny kolontsaina malagasy toy ny sokitra, ny karazana amponga vita amin’ny hoditra, ny korintsana, ny jiafotsy, sns. Nambarany fa tsy mbola ampy hanodinana ny tsena ny zava-misy ankehitriny satria saika vahiny avy any ivelany avokoa ny mpanjifa “matanjaka” ny entana amidin’izy ireo.
“Manondrana mankany amin’ny faritany ihany izahay kanefa hatreto, tsy mbola tonga ny mpaka entana satria mbola tsy misy mpizahatany tonga ihany koa any amin-dry zareo”, hoy hatrany ity mpivarotra asa tanana ity. Ny mpividy asa tanana malagasy avy eto an-dRenivohitra ihany izany no antenaina hanjifa ny entana. “Mbola ady varotra goavana be vao mahalafo korintsana iray ianao”, hoy izy.
Nohazavain’Andrianaivo Bertoh fa mbola raharaha goavana ihany koa ny mahazo ireo mpivarotra fotsiny asa tanana fa tsy mpanamboatra. “Lasa manao raharaha hafa toy ny fiompiana sy ny fambolena any ambanivohitra ireo mpanao asa tanana noho ny tsy fisian’ny tsena tao anatin’ny dimy volana mahery”, hoy izy. Misy amin’ireo ny te hampifamadika ny rasa ka io fiompiana sy fambolena io no tena ataony fameloman-tena fa vadin’asa kosa ny fanaovana asa tanana. “Rehefa kelikely eo, raha toa ka miverina soa aman-tsara ny tsena, hiteraka olana ho anay io tranga io satria mety tsy hifanaraka amin’ny tinady ny tolotra, na eo amin’ny kalitaony izany (mety ho zara fa vita) na eo amin’ny isany (mety ho tsy ampy)”, hoy hatrany izy. Mbola olana manaraka tsy maintsy hovahana ihany koa izany!
… Fa nanterin’ity mpivarotra asa tanana ity ihany koa fa olana manokana ho an’Antananarivo ny tsy fijanonan’ny mpizahatany fotoana maharitra eto. Zary toeram-pandalovana fotsiny eto an-dRenivohitra, hany ka na eto aza no hamboarina ny asa tanana, tsy maintsy alefa any amin’ny faritra ihany izany, hojifain’ny mpizahatany. “Mila ataon’ny tompon’andraikitra izay hahatonga ity Renivohitra ity hahatamana mpizahatany. Manana toerana manan-tantara Antananarivo. Manana zavaboahary mahaliana, saingy izany rehetra izany, tsy ampy fampahafantarana, hany ka zara raha mandany andro iray eto ny vahiny”, hoy izy.